Butterflyfish - Ubomi base Lwandle - Mzantsi Afrika
Ukufika kwi-25 cm
I-Oval, icinezelekile kamva. Iifins zinqenqeza emva. Isiphetho seCaudal sijikelezwe okanye sifutshane (sinqunyiwe). Umtsalane udibanisa kwaye unwetshwe ngamazinyo amancinci njengamazinyo amancinci. Umbala obalalayo. Ezinye zinemizila kunye nemigca. Uninzi kunye neqela elimnyama ngapha kwelihlo.
Intsapho yeChaetodontidae inezintlu eziyi-10 kunye nezilwanyana ezingu-114. Iintlobo eziqhelekileyo neziqhelekileyo kwiindawo ezininzi zeerali. Ukutya ngexesha lomhla. Ukuhamba ibanga elide ukusuka kwibanga lasekhaya ekukhangela ukutya. Ngokuqhelekileyo kuthatha umbala werhafu. Abanye bafaka izikolo, kodwa ezininzi zivela ngeebini. Abahlaziyi bePelagic.
Ukutya kwama-polyp polps, ama-invertebrates amancinci, iiqanda zeentlanzi kunye ne-algae. Ezinye ziingcali okanye zondla kwi-plankton kuphela. Ezinye iigwetyi zisebenza 'njengezihlambululi' zezinye iintlanzi, ukuqokelela ama-parasites.